Pirezidant Tiraamp: Ameerikaan ‘godaantota baratan qofa simatti’ - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Donaaldi Tiraampi mooraa Waayit Haawus keessatti
Ameerikaan godaansa biyyoota adda addaarraa gara biyyasheetti taasifamu ilaalchisuun seera haaraa baaste.
Akka seera haaraa kanaatti namoonni gara Yuunaayitid Isteetisitti godaanan kanneen umuriin hin jaarre, kan barnoota qabanii fi afaan Ingilizii dubbachuu kan danda'an ta'uu qabu.
Pirezidaantiin biyyattii Doonaaldi Tiraampi waajjirasaanii olaanaa Waayit Haawusitti ibsa kennan keessatti sirna simannaa godaantotaa kan hidhata maatiitiin gara US seenuu deggeru jijjiiruu akka barbaadan wiixineessaniiru.
Eegumsi daangaarraa akka daranuu cimuu fi seerri simannaa koolu galtootaa akka cimus ibsaniiru.
Qondaaltonni olaanoon Dimokiraatotaa yaada Tiraampi dhiyeessan kanaan ''Kan utuu hin ga'in du'eedha'' ittiin jedhan.
Qondaaltonni kunneen sirni godaansaa haaraan kun ijoollee maatiiwwan godaantotaa US keessa jiran kan ragaa jireenyaa hin qabnetti karaa cufa waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhu.
Obbo Tiraampi maal jedhan?
Pirezidaanti Tiraampi karoorri kun sirna qabiinsa godaantotaa US gara ammayyaatti kan ceesisuudha jedhan.
''Godaantotaaf balballi keenya banaadha. Garuu godaantonni kanneen dandettii barnootaa qaban ta'uu qabu. Godaantonni barnoota qaban kanneen gara US godaanan harka 12 turan. Isaan kana gara harka 57 fi sanaa oliitti guddisuuf karoorfanneerra.''
Goodayyaa suuraa Yeroo ammaa godaantonni gara US seenan warra maatii biyyasii qabaniidha
Akka isaan jedhanitti godaantonni biyya US'tti galmaa'uun dura afaan Ingilizii barachuu fi qormaata barnoota siiviksii darbuu qabu.
Adeemsa kenniinsa koolugaltummaa yeroo ammaa jiru kan qeeqan Pirezidaanti Tiraampi ''Biyyi keenya namoota dararaa mootummaa biyaasaanii baqatanii dhufaniif da'oo ta'uu taatee turuusheetti ittiin boonti. Garuu namoonni karaa seeraa fi haqa qabeessa ta'een koolugaltummaa gaafatan sababa warra karaa seeraan alaa deemaniin carraa dhabaa jiru'' jedhan.
Warri Dimokiraatotaa maal jedhan?
Afa yaa'iin Mana maree bakka bu'oota uummataa Warra Dimokiraatotaa Nancy Pelosi'' Wiixineen seeraa dursee du'e kun karoora yeroo dheeraa hojjechiisu of keessaa hin qabu. Namoonni hanga har'aatti gara US baqataa jiran namoota hin baranneedha jechuun hin danda'amu. Yoo barnoota injinariingiitiin digirii hin qabaanne hin baranne jechuudhaa?'' jechuun yaada kenniteetti.
Miseensa Kongireesii Warra Dimokiraatotaa kan taate Pramila Jayapal gamasheetiin seerri haaraan kun sirni godaantotaaf carraa kennuu karaa maatii godaantotaatiin raawwatamaa ture kan adeemsa kenniinsa koolugaltummaa US'f bu'uura ta'e kan faallessuudha waan ta'eef sirrii miti jetti.
Goodayyaa suuraa Nancy Pelosi
"Namoota maatii horatanii biyya kana keessa jiraataniif eegumsi godhamu maal akka ta'e hin ibsamne. Namoota miiliyoona 11 kanneen US keessa jiraatan garuummoo ragaa jireenyaa hin qabne of keessatti hin hammanne.'' jetti.
Pirezidaanti Tiraampi haasawa isaanii keessatti ''Sababa ta'een yoo waaixineen karooraa kun mirkanaa'uu baate akkuma filannoon xumurameen hojiirra oolchina. Yoo filatamnee teessoo caalmaa mana maree bakka bu'oota uummataa qabannee, seenetii hoogganne, achiis pirezidaantii taane karoora kana gara hojiitti hiikna.'' jedhan.
Waayit Haawus hayyama hojii gaazexeessaa CNN haqe
Ameerikaan loltoota 5,200 gara daangaa Meeksikoo waliinitti ergite
Leenjii milishaa daangaa Ameerikaa irratti Obaamaa ajjeesisuuf kenname